विराट अस्पताल प्र’क’र’ण : आ’क्र’म’ण नभएको भए डाक्टर चौधरी ब’च्थे! अकस्मात् डाक्टरमाथि आ’क्र’म’ण स्वास्थ्यकर्मीको भा’गा’भा’ग हेर्ने कोही नभएपछि १० मिनेटपछि डा. मुकेशको मृ’त्यु भयो!(भिडियो) – Taja Khawar
विराट अस्पताल प्र’क’र’ण : आ’क्र’म’ण नभएको भए डाक्टर चौधरी ब’च्थे! अकस्मात् डाक्टरमाथि आ’क्र’म’ण स्वास्थ्यकर्मीको भा’गा’भा’ग हेर्ने कोही नभएपछि १० मिनेटपछि डा. मुकेशको मृ’त्यु भयो!(भिडियो)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०८, २०७८ समय: १:३२:२६
May 21, 2021 i news 13NewsNo Commenton विराट अस्पताल प्र’क’र’ण : आ’क्र’म’ण नभएको भए डाक्टर चौधरी ब’च्थे! अकस्मात् डाक्टरमाथि आ’क्र’म’ण स्वास्थ्यकर्मीको भा’गा’भा’ग हेर्ने कोही नभएपछि १० मिनेटपछि डा. मुकेशको मृ’त्यु भयो!(भिडियो)
सोमबार साँझ साढे ८ बजेको थियो। विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजका केही डाक्टर दु’र्घट’नामा परेर घा’इते भएका दुई जनाको उपचारमा ख’टिए’का थिए। अन्य अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी कोभिडका बिरामीको उपचारमा त’ल्लीन थिए। सिकिस्त रहेका लहान अस्पतालका डा. मुकेश चौधरीको पनि उपचार भइरहेको थियो। त्यही ब’ख’त दुई युवा वृद्धालाई लिएर अस्पताल प्रवेश गरे। सुगरबाट पीडित ७३ वर्षीया बिरामीलाई रिं’गा’टा च’ल्न र टा’उ’को दु’ख्न थालेपछि आफन्तले अस्पताल ल्याएका रहेछन्।
वृद्धालाई लिएर आएका आफन्तले तुरुन्त बिरामी हेरिदिन आग्रह गरे। दु’र्घ’ट’नामा परी ग’म्भी’र घा’इते भएका र सि’कि’स्त अवस्थाका डाक्टरको उपचार गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले केही बेर पर्खन आग्रह गरे। लगत्तै वृद्धा लिएर आएका २ युवाले आ’क’स्मि’क कक्षमा कार्यरत चि’कि’त्स’क र स्वास्थ्यकर्मीमाथि एक्कासि आ’क्र’म’ण गरे। आ’क्र’म’णमा परी चि’कि’त्सक डा. सुदीप रेग्मी र हेल्थ असि’स्टेन्ट निर्दोष बस्नेत घा’इ’ते भएका छन्। आ’क्र’मण’बाट डा. रेग्मी र बस्नेतको टा’उ’को, अनुहार र श’री’रका विभिन्न भा’गमा चो’ट लागेको अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुनिल देवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार २ सफाइकर्मी पनि घा’इते भएका छन्। घ’ट’नाका विषयमा जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामी लो’कल हौं, हामीलाई कुराउने भन्दै युवाले अ’क’स्मात् आ’क्र’म’ण गरेका थिए।’ घा’इ’तेको अवस्था सामान्य छ। ‘आ’क्र’म’ण नभएको भए र उपचारमा कुनै समस्या नपरेको भए डा. मुकेशलाई बचाउन सकि’न्थ्यो जस्तो लाग्छ। अ’क’स्मात् भएको आ’क्र’म’णले भा’गा’भा’ग म’च्चि’यो। उहाँलाई हेर्ने कोही भएनन्। त्यसैले जो’गा’उन सकिएन।’
फोकल पर्सन डा. देवका अनुसार यही आ’क्र’म’णका कारण अस्पतालमा उपचाररत एक चि’कि’त्स’कको मृ’त्यु भएको छ। कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणका कारण ग’म्भी’र बिरामी भएका डा. मुकेश चौधरीको इमरजेन्सीमा उपचार चलिरहेको थियो। अक्सिजन रा’ख्ने र परीक्षण गर्ने काम हुँदै थियो। त्यही बेला अकस्मात् डाक्टरमाथि आ’क्र’म’ण भयो। स्वास्थ्यकर्मीको भा’गा’भा’ग चल्यो। डा. मुकेशलाई हेर्ने कोही भएनन्। गम्भीर बिरामी यो घ’ट’ना भएको १० मिनेटपछि डा. मुकेशको मृ’त्यु भयो।
‘आ’क्र’म’ण नभएको भए र उपचारमा कुनै सम’स्या नपरेको भए डा. मुकेशलाई ब’चा’उन सकि’न्थ्यो जस्तो लाग्छ। अ’कस्मा’त् भएको आ’क्र’मण’ले भा’गा’भा’ग म’च्चि’यो। उहाँलाई हेर्ने कोही भएनन्। त्यसैले जो’गा’उन सकिएन’, सुनिलले भने। डा. मुकेश चौधरी लहान अस्पतालका अ’र्थोपे’डिक स’र्जन हुन्। ३८ वर्षीय उनी कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणले गाँ”जेपछि सोमबार मात्रै विराट मेडिकल कलेजको इमरजेन्सीमा भर्ना भएका थिए। अ’ना’ह’कमा भएको आ’क्र’म’णकै कारण डा. मुकेशको मृ’त्यु भएको विराट मेडिकल कलेजका फोकल पर्सन देवको ठहर छ।
उनले भने, ‘यस्ता अ’रा’ज’क ग’ति’विधिका कारण क’यौं बिरामीले अ’ना’ह’कमा ज्या’न गु’मा’उनुपर्ने हो थाहा छैन। तर सोमबार राति जे भयो त्यसले हामीलाई अत्यन्त दुःखी बनाएको छ।’ दिनरात नि’द्राभो’क केही नभनी ज्या’नको बा’जी लगाएर उपचारमा खटिरहेका छाैं। तर, हामीमाथि नै आ’क्र’म’ण हुन्छ। अब तपाईं नै भन्नुस्, यस्तो भएपछि हामी कसरी काम गर्न सक्छौं?
उनले दुःखेसो पो’खे। ‘घ’ट’नापछि ऊर्जा मात्रै म’रेको छैन, त्रा’ससमेत बढेको छ’, डा. देवले सुनाए। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काका अनुसार बूढीगंगा–२ का २८ वर्षीय निश्चल श्रेष्ठ र २५ वर्षीय अनिल श्रेष्ठसहितको समूहले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आ’क्र’म’ण गरेको हो। उनले आ’रो’पि’तलाई प’क्रा’उ गरिएको बताए। उपचारका लागि भर्ना भएकी वृद्धाको उपचार गर्न ढि’लो गरेको भन्दै सो समूहले आ’क्र’म’ण गरेको उनले बताए। घ’ट’नाका सम्बन्धमा थप अ’नु’स’न्धान भइरहेको खड्काले जनाएका छन्। धिरज बस्नेत नेपाल समयबाट साभार
Last Updated on: May 22nd, 2021 at 1:33 am
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा एमाले विजयी, निवर्तमान अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पराजित